डचटाउन जनसांख्यिकी • डचटाउनएसटीएल.आर. • डचटाउन, सेन्ट लुइस, MO
कुनै पनि सहरी छिमेक जस्तै, डचटाउनले गत १ 150० बर्षमा कठोर जनसांख्यिकीय परिवर्तन देखेको छ। आउनुहोस्, डचटाउनको जनसांख्यिकीलाई यसको एक दिनदेखि अहिलेको ग्रामीण चौकीको रूपमा हेरौं।
एक पुरानो घर डचटाउनको दक्षिण ब्रॉडवेको छेउमा भेटियो।
प्रारम्भिक इतिहास: मध्य कहीँ छैन
यो डचटाउनको नामले चिनिनु अघि यो क्षेत्र उत्तरमा सेन्ट लुइस र दक्षिणमा कर्न्डेटलेटको साझा क्षेत्रहरूको हिस्सा थियो। गृहयुद्ध हुनुभन्दा अघि यी दुई शहरहरूको बीचमा थोरै विकास भएको थियो। कर्न्डेलेट रोड, अब दक्षिण ब्रॉडवे, सेन्ट लुइस र कार्नेलेटलाई डचटाउनको माध्यमबाट जोडे।
१ua1860० मा पदुआको सेन्ट एन्थोनीको पेरिस स्थापना भएको थियो। १ 1864 मा मेरामेक स्ट्रीटमा उनीहरूको पहिलो चर्च निर्माण गर्नु भन्दा पहिले पेरिशियनहरूले त्यस भूमिमा रहेको अनाथालय हाउस अफ रिफ्यूजीमा सेवा गरेका थिए। मार्क्वेट पार्क। सन्‌ १ 1860० को सुरुतिरको मण्डली German० जर्मन भाषी परिवारहरू र २ English अ English्ग्रेजी बोल्ने परिवारहरू मिलेर बनेको थियो, जसमध्ये ११70 स्कूल-उमेरका बच्चाहरू थिए।
१ipp1875 मा चिप्पेवा स्ट्रिट, कम्पटन र ड्राईबाट सचित्र सेन्ट लुइस.
द्रुत ग्रोथ: जर्मनहरू आइपुग्छन्
सेन्ट लुइसले सन् १ 1870० मा कार्नेलेट (र सबै बीचको) को संलग्नताका साथ यसको सिमाना विस्तार गर्‍यो। साझा क्षेत्रहरू विभाजित र विकासको लागि प्लेट गरिएको थियो। चाँडै, जर्मन आप्रवासीहरू विस्तार गरिएको शहरको भर्खरै खोलिएको दक्षिणपूर्वी भागहरूमा बसाइँ सर्न थाले। जर्मनहरू, वा Deutsche, जरा लगाए र धेरै दशकहरु को लागी यस क्षेत्र मा फलीयो। नाम "डचटाउन" शब्दबाट आएको हो Deutsche.
Meramec Street सडक १ west1887। मा क्यालिफोर्निया एवेन्यूबाट पश्चिमतिर हेर्दै।
१1880० र 1920 बीचमा डचटाउन एकदम चाँडो बृद्धि भयो। छिटोले छिट्टै यसको ग्रामीण चरित्र बगाउँदछ कि बलियो इट्टा घरहरू र पसलहरू नयाँ निर्माण स्ट्रिटकार लाइनहरू वरिपरि पप्प अप। आज पनि डचटाउनमा अझै उभिरहेका भवनहरू यस अवधिमा बनाइएको थियो।
१ 1950 .० को दशकको छेउछाउमा पनी बढ्दै र फस्टायो। दुर्भाग्यवस, चाँडै नै डचटाउन, सेन्ट लुइस र समग्र अमेरिकाका शहरी केन्द्रहरूमा परिवर्तन हुन थाल्छ।
मेरामेक १ 1950 s० को दशकमा भर्जिनिया एवेन्यूबाट पूर्वतिर हेर्दै।
मध्य शताब्दी परिवर्तनहरू: उपनगरीय प्रस्थान
दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात युगले अमेरिकीहरूको जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो र डचटाउन पक्कै पनि ती परिवर्तनहरूद्वारा प्रभावित भएको थियो।
युद्ध पछि, जवान मानिसहरू परिवार सुरू गर्न घर फर्के। जीआई बिलले जवान परिवारहरूलाई शहरको बाहिरी इलाकामा नयाँ विकासशील उपनगरहरूमा घरहरू खरीद गर्न प्रोत्साहन दियो। उपनगरहरु एक डरलाग्दो गतिमा बढेको।
घर मालिक anण कर्पोरेशनबाट नक्शा redlining। पहेंलो क्षेत्रहरू "निश्चित रूपमा गिरावट" को रूपमा परिचित थिए र रातो क्षेत्रहरू loanण अधिकारीहरूको लागि "खतरनाक" मानिन्थ्यो। बाट म्यापि Ma असमानता.
यदि प्रोत्साहन पर्याप्त थिएन भने, धितो redlining बैंकहरू द्वारा रहन चाहनेहरूका लागि गाह्रो भयो। बैंकरहरू छिमेकमा घरहरूमा loansण जारी गर्न हिचकिचाउँथे, विशेष गरी छिमेकको पुरानो पूर्वी भागहरूमा।
सेन्ट लुइस मेट्रो क्षेत्रमा १ – –०-१– .० मा डेमोग्राफिक परिवर्तनहरू। बाट नक्सा मानचित्रण अस्वीकार कोलिन गोर्डन द्वारा।
अन्तरराज्यीय राजमार्ग प्रणालीको निर्माणले उपनगरहरूमा उडानलाई द्रुत बनायो। १ 1960 s० को दशकमा अन्तरराज्यीय 55 XNUMX ने डचटाउनको पूर्वी भागमा अन्धाधुन्ध कटौती गरे, घरहरू ध्वस्त पार्दै, छिमेकीहरूलाई उखेल्दै, र पूर्व र पश्चिम काटियो। स्वत: केन्द्रित विकासले स्ट्रीटकार लाइनहरू सहित छिमेकी वाणिज्यिक जिल्लाहरूबाट व्यवसाय शुरू गर्‍यो, र चाँडै नै स्ट्रीटकारहरू आफै हराइदिए।
सेन्ट लुइस मेट्रो क्षेत्रमा १ – –०-१– 1960० मा डेमोग्राफिक परिवर्तनहरू।
पछिल्लो २० औं शताब्दी: दक्षिण पक्ष फरक
१ 1960 s० को दशकमा नागरिक अधिकारका लागि लडाईं पछ्याई, र color्गाउने मानिसहरूसँग सहरमा कहाँ बस्ने भन्ने विकल्पहरू थिए। पहिले उत्तर साईड वा मिल क्रिक भ्याली क्षेत्रमा निकै सुन्दर, कालो मानिसहरू शहरका अन्य भागमा फैलिन थाले (यद्यपि सधैँ रोजाइको रूपमा होइन तर तथाकथित शहरी नविकरणद्वारा विस्थापनको माध्यमबाट)।
सेन्ट लुइस मेट्रो क्षेत्रमा १ – –०-१– 1970० मा डेमोग्राफिक परिवर्तनहरू।
दक्षिण पक्ष यसको धेरै जसो इतिहासको लागि कडा सेतो थियो, तर १ 1970 .० र १ 1980 s० को दशकमा, कालोहरू दक्षिणको छेउछाउको छेउछाउमा सर्न थाले, आंशिक रूपमा खाली ठाउँ भर्ने क्रममा गोरेहरूले विस्तार हुँदै गएको उपनगरीय इलाकामा सर्दै गयो।
थप दक्षिण, डचटाउन गोरेहरू द्वारा अत्यधिक जनसंख्या रह्यो। सन् १ 1980 .० मा डचटाउनका करीव १ 18,000,००० बासिन्दाहरू मध्ये, लगभग १०० मात्र कालो थिए। कोही भन्छन् कि चिप्पेवा सडक विभाजन रेखा थियो जहाँ कालो इन्ट्रासिटी माइग्रेसन रोकिएको थियो।
सेन्ट लुइस मेट्रो क्षेत्रमा १ – –०-१– 1980० मा डेमोग्राफिक परिवर्तनहरू।
मिलेनियमको पालो: स्थिरता लेराउँदछ
१ 1990 2000 ० र २००० को दशकमा डेमोग्राफिक शिफ्टहरू दक्षिणतर्फ देखा परेको ठाउँमा डचटाउनमा ल्याइएको थियो। दक्षिण पक्षको केही क्षेत्रहरू पुनर्निर्माण र हल्का गर्न थालेपछि ती विस्थापित बासिन्दाहरूले आफूलाई डचटाउनको किफायती, कडा र घना आवास स्टकमा भेट्टाए।
सेन्ट लुइस मेट्रो क्षेत्रमा १ – –०-१– 1990० मा डेमोग्राफिक परिवर्तनहरू।
१ 1990 2010 ० र २०१० बीच, डचटाउन 90 ०% सेतोबाट कालो र गोराको समान अनुपातमा सारियो। रंगका मानिसहरू अब डचटाउन जनसंख्याको बहुमत।
सेन्ट लुइस मेट्रो क्षेत्रमा १ – –०-१– 2000० मा डेमोग्राफिक परिवर्तनहरू।
काला मान्छे को भीड को साथ संसार भर बाट आप्रवासीहरु, शहर को बाँकी शहर को तुलना मा डचटाउन जनसंख्या स्थिर बनाउन मा मद्दत छ। सन् १ 1950 as० को दशकमा करीव एक मिलियन जनसंख्याको शिखर जनसंख्याबाट सेन्ट लुइस पूरै दुई तिहाई बासिन्दाहरू गुमाए।
१ 70 s० को दशकदेखि population०% जनसंख्या घटेको देखाउँदै फोरेस्ट पार्क साउथ ईस्ट र श हेमरेजेड बासिन्दाजस्ता छिमेकीहरूले १ 1950 s० देखी डचटाउनको जनसंख्याको एक तिहाइ हिस्सा मात्र गुमाए। यो जनसंख्या स्थिरताले अन्य मुद्दाहरूको बीचमा परित्यागलाई रोक्न मद्दत गरेको छ। अन्य शहर छिमेकमा देखिएको छ।
हुनत FPSE र शले भर्खरका वर्षहरूमा उल्लेखनीय पुनरुद्धार देखेका छन् कि नयाँ विकास त्यहाँ भएको भन्दा कम सघन छ। यसै बीच, डचटाउन सेन्ट लुइसको सबैभन्दा घनी जनसंख्या भएको क्षेत्र हो, प्रति वर्ग माईलमा १०,००० बासिन्दाहरूको आवास।
डचटाउन छिमेकीहरू उद्घाटन साझा ध्वनि महोत्सव मा मार्क्वेट पार्क.
आज डचटाउनको डेमोग्राफिक्स
२०१ 2017 सम्म, डचटाउन उचितसँग १ 16,000,००० भन्दा बढी बासिन्दाहरू छन्, यो जनसंख्याको आधारमा यो शहरको सब भन्दा ठूलो छिमेक बनेको छ। प्रति वर्ग माईल लगभग ११,11,300०० बासिन्दाहरूको साथ, डचटाउन शहरको घनाइराला क्षेत्रहरू मध्ये एक हो। मध्यवर्ती घरेलू आम्दानी एक बर्ष लगभग ,26,000 २$,००० छ, डचटाउनलाई आसपासको टुक्राहरूको छेउमा राख्छ। डचटाउनको जनसंख्या धेरै युवा छ, यसको १aवर्ष भन्दा कम उमेरका बासिन्दाहरूको एक तिहाइ भाग।
डचटाउन 51.2१.२% कालो, २.26.3..11.5% सेतो, ११..8.2% हिस्पैनिक, .2.3.२% एशियाई, २.0.6% मिश्रित दौड, र ०..XNUMX% अर्को पृष्ठभूमि हो। विविधता सूचका ,्क, जनसंख्यामा कुनै पनि दुई यादृच्छिक मानिस फरक जाति भएको सम्भावना डचटाउनमा धेरै उच्च हुन्छ।
विविधता मा शक्ति
एक विविध र गतिशील जनसंख्या मूलतः मूलतः जर्मन आप्रवासीहरू के देखि आएको छ। डचटाउन एक त्यस्तो स्थान रहन्छ जहाँ छिमेकीहरू सँगै बस्न, प्रार्थना गर्न, अध्ययन गर्न, काम गर्न, किनमेल गर्न, र जडानको लागि जम्मा हुन्छन्।
विविधता डचटाउनको धेरै शक्तिहरू मध्ये एक हो। समुदायको सment्लग्नता, प्रयास, र रणनीतिक साझेदारीको साथ हामी एक सम्पन्न, न्यायसंगत, समावेशी छिमेकसँगै निर्माण गर्न सक्दछौं।
प्रयोग भएको केहि डाटाले डचटाउन छिमेकलाई बुझाउँदछ जुन सेन्ट लुइसको शहरले निर्दिष्ट गरेको छ, र अन्य डाटाले ग्रेटर डचटाउन क्षेत्रलाई जनाउँदछ। प्रवृत्तिहरू दुबै केसहरूमा सामान्य रूपमा एकरूप हुन्छन्, तर संख्याहरू फरक फरक हुन सक्दछन्। कुनै पनि डेटा विज्ञहरू जसले हाम्रो डेटा अझ सुसंगत बनाउन मद्दत गर्न चाहन्छ स्वागतको भन्दा बढी हो हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस!
ग्रेटर डचटाउन जनसंख्या संख्या जनगणना पर्चाहरूबाट लिइएको हो जसले डचटाउन, ग्रेभोजी पार्क, मरीन भिल्ला, र माउन्ट प्लेइजन्टको महत्त्वपूर्ण अंशहरू समेट्छ, तर केहि केसहरूमा ती सीमानाहरू बाहिर जान्छ। समावेश गरिएको पर्चाहरू ११–––११1153, ११1157.०२ र ११1163.02, १२1164१, १२1241,, र १२.. छन्। १ 1243 1246 ० भन्दा पहिले, ट्र्याक्ट ११1990.०२ ठूलो पर्चाको हिस्सा थियो, ११1163.02, जसमा प्राय: ठूलो डचटाउन क्षेत्र भन्दा बाहिरको क्षेत्र ओगटेको थियो; जस्तै, १ 1163 1990 ० पूर्व जनसंख्या तथ्या figures्क थोरै फुलेका छन्।
यस पृष्ठ साझा गर्नुहोस् फेसबुक, twitter, वा मार्फत इमेल। यो पृष्ठ अन्तिम पटक अपडेट गरिएको थियो फेब्रुअरी 10th, 2021 .
DutchtownSTL.org डचटाउनको बारेमा डचटाउन जनसांख्यिकीय